Burmese - LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe. | Amara
Supported By Protocol Labs
Protocol Labs မှပံ့ပိုးသည်
Supported By Protocol Labs Follow your curiosity.
Protocol Labs မှပံ့ပိုးသည်သင်၏သိလိုစိတ်ကိုလိုက်နာပါ။
Supported By Protocol Labs Follow your curiosity. Lead humanity forward.
Protocol Labs မှပံ့ပိုးသည်သင်၏သိလိုစိတ်ကိုလိုက်နာပါ။ ရှေ့ဆက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ဦး ဆောင်လမ်းပြ။
Two possibilities exist: either we are alone in the universe,
ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ inာတွင်တစ် ဦး တည်းရှိနေသည်။
Two possibilities exist: either we are alone in the universe, or we are not.
ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ inာတွင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမဟုတ်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ inာတွင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမဟုတ်ပါ။ နှစ် ဦး စလုံးအညီအမျှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ inာတွင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမဟုတ်ပါ။ နှစ် ဦး စလုံးအညီအမျှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ Arthur C. Clarke
Two possibilities exist: either we are alone in the universe, or we are not. Both are equally terrifying. Arthur C. Clarke In all of time,
ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြာ ၀ inာတွင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမဟုတ်ပါ။ နှစ် ဦး စလုံးအညီအမျှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အချိန်တိုင်းတွင် Arthur C. Clarke၊
on all the planets of all the galaxies in space.
looked into the night,
seen what we see,
"Is Earth the only chapter in the story of life?"
"The answers lie somewhere in distant space - and distant time."
"For the first time, the truth is finally within our reach."
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့အမှန်တရားဟာနောက်ဆုံးမှာငါတို့လက်လှမ်းမီနိုင်ပါပြီ။
"The search will reveal who we are"
"and who we might become."
CHAPTER I The Dawn
"In the search for life out there, we must first look inward."
"အဲဒီမှာဘဝရှာဖွေရေးအတွက်ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြည့်ရှုရပေမည်။ "
What we see around us is staggering complexity.
"What does it take to create life?"
"What does it take to create life?" Living organisms are created by chemistry.
"ဘဝကိုဖန်တီးဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ " သက်ရှိသက်ရှိများကိုဓာတုဗေဒဖြင့်ဖန်တီးသည်။
ကျနော်တို့ဓာတုပစ္စည်းများ၏ကြီးမားသော packages များဖြစ်ကြသည်။
ဦး ဆုံး၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I Well, first, you need energy.
ငါကောင်းပြီ၊ ပထမ၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I E Well, first, you need energy.
ငါအီးကောင်းပြီ၊ ပထမ၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I EN Well, first, you need energy.
ငါ EN ကောင်းပြီ၊ ပထမ၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I ENE Well, first, you need energy.
ငါ ENE ကောင်းပြီ၊ ပထမ၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I ENER Well, first, you need energy.
ငါ ENER ကောင်းပြီ၊ ပထမတော့မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I ENERG Well, first, you need energy.
ငါ ENERG ကောင်းပြီ၊ ပထမ၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I ENERGY Well, first, you need energy.
ငါစွမ်းအင်။ ပထမ၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I ENERGY e.g Well, first, you need energy.
ငါ ENERGY e.g ။ ပထမဆုံး၊ မင်းစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I ENERGY e.g Sunlight, Well, first, you need energy.
ငါ ENERGY e.g နေရောင်ခြည်၊ ကောင်းပြီ၊ ပထမဆုံး၊ မင်းကစွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
I ENERGY e.g Sunlight,
ငါစွမ်းအင် e.g နေရောင်ခြည်၊
I ENERGY e.g Sunlight, Geothermal Heat
ငါ ENERGY e.g နေရောင်ခြည်, ဘူမိအပူ
I ENERG e.g Sunlight, Geothermal Heat
ငါ e.g နေရောင်ခြည်, ဘူမိအပူ
I ENER e.g Sunlight, Geothermal Heat
I ENE e.g Sunlight, Geothermal Heat
I EN e.g Sunlight,
ငါ e.g နေရောင်ခြည်,
I E e.g
and planets it turns out are just right,
because they are close to stars,
You also needagreat diversity
II You also needagreat diversity
II HE You also needagreat diversity
II သူ။ သင်တို့သည်လည်းမတူကွဲပြားမှုများကိုလိုအပ်သည်
II HEA You also needagreat diversity
II HEA သင်၌မတူကွဲပြားမှုများစွာလိုအပ်သည်
II HEAV You also needagreat diversity
II HEAV သင်၌မတူကွဲပြားမှုများစွာလိုအပ်သည်
II HEAVY You also needagreat diversity
II Heavy သင်သည်ကြီးစွာသောမတူကွဲပြားမှုကိုလည်းလိုအပ်သည်
II HEAVY E You also needagreat diversity
II Heavy E မင်းဟာမတူကွဲပြားတဲ့မျိုးစုံလိုအပ်တယ်
II HEAVY EL You also needagreat diversity
II Heavy El မင်းဟာကြီးမားတဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုလည်းလိုအပ်တယ်
II HEAVY ELE You also needagreat diversity
II Heavy Ele သင်တို့လည်းကြီးမားတဲ့မတူကွဲပြားမှုလိုအပ်ပါတယ်
II HEAVY ELEM You also needagreat diversity
II HEAVY ELEM သင်ဟာမတူကွဲပြားတဲ့မျိုးစုံလိုအပ်တယ်
II HEAVY ELEME You also needagreat diversity
II HEAVY ELEME ခင်ဗျားတို့မှာမတူကွဲပြားတဲ့မျိုးစုံလိုအပ်တယ်
II HEAVY ELEMEN You also needagreat diversity
II HEAVY ELEMEN သင်၌မတူကွဲပြားသောကွဲပြားမှုများလိုအပ်သည်
II HEAVY ELEMENT You also needagreat diversity
II Heavy element မင်းဟာကြီးမားတဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုလည်းလိုအပ်တယ်
II HEAVY ELEMENTS You also needagreat diversity
II HEAVY ELEMENTS e.g of chemical elements.
ဓာတုဒြပ်စင်၏ II ကိုအကြီးမားဆုံးသော element e.g ။
II HEAVY ELEMENTS e.g Oxygen, of chemical elements.
ဓာတုဒြပ်စင်၏ II ကိုအကြီးမားဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းများ e.g အောက်စီဂျင်။
II HEAVY ELEMENTS e.g Oxygen, Carbon, of chemical elements.
ဓာတုဒြပ်စင်များ ၂။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်စီဂျင်၊ ကာဗွန်၊
II HEAVY ELEMENTS e.g Oxygen, Carbon, Sulfur of chemical elements.
၂။ ပြင်းထန်သောဒြပ်စင်များဥပမာအားဖြင့်အောက်စီဂျင်၊ ကာဗွန်၊ ဓာတုဒြပ်စင်များ၏ဆာလ်ဖာ။
II HEAVY ELEMENTS e.g Oxygen, Carbon, Sulfur
အောက်စီဂျင်၊ ကာဗွန်၊ ဆာလ်ဖာe၂ ပြင်းထန်သောဒြပ်စင်များ
II HEAVY ELEMENT e.g Oxygen, Carbon, Sulfur
II ကို Heavy element e.g အောက်စီဂျင်, ကာဗွန်, ဆာလ်ဖာ
II HEAVY ELEMEN e.g Oxygen, Carbon, Sulfur
II ကို Heavy Elemen e.g အောက်စီဂျင်, ကာဗွန်, ဆာလ်ဖာ
II HEAVY ELEME e.g Oxygen, Carbon,
II Heavy Elem e.g Oxygen, Carbon,
II HEAVY ELE e.g Oxygen, Carbon,
II Heavy Ele e.g အောက်ဆီဂျင်၊ ကာဗွန်၊
II HEAVY EL e.g Oxygen,
II ကို Heavy EL e.g အောက်ဆီဂျင်,
II HEAVY E e.g
II ကိုအကြီးအကျယ်အီး e.g
II ကို Heavy
II ကို HEA
II ကို H
And you need liquid,
III such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကို။
III L such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကို L ကို။
III LI such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကို LI ။
III LIQ such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကို LIQ ။
III LIQU such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကို LIQU ။
III LIQUI such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကို Liqui ။
III LIQUID such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကိုအရည်။
III LIQUID e.g such as water.
ထိုကဲ့သို့သောရေအဖြစ် III ကိုအရည် e.g ။
III LIQUID e.g Water such as water.
III အရည် - ဥပမာရေကဲ့သို့သောရေ။
III LIQUID e.g. water
ဥပမာအားဖြင့် III ကိုအရည် ရေ
Well, in gases,
atoms move past each other so fast
အက်တမ်များသည်အလွန်လျင်မြန်စွာတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအတိတ်ရွှေ့
In solids, atoms are stuck together.
သူတို့က cruise နှင့် cuddle နိုင်ပါတယ်
Liquid water is just so good for getting evolution going.
Molecules can dissolve in the water
to form more complex chains.
အခုတော့အဲဒီလို goldilocks တွေရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
and our early Earth was almost perfect.
Earth4Billion Years Ago
ကမ္ဘာမြေ4ဘီလီယံလွန်ခဲ့သည့်နှစ်
It was just the right distance
from its star to contain huge oceans of liquid water.
၎င်း၏ကြယ် မှနေ၍ ကြီးမားသောသမုဒ္ဒရာရေများပါ ၀ င်သည်။
atoms combined in all sorts of exotic combinations.
"The exact recipe is stillamystery, but the ingredients for life are simple - energy, organic molecules, and liquid water."
"Somewhere in the seas of early Earth, basic chemistry became biology - perhaps even more than once."
"ကမ္ဘာမြေ၏အစောပိုင်းပင်လယ်ပြင်တစ်နေရာရာ၌အခြေခံဓာတုဗေဒသည်ဇီဝဗေဒဖြစ်လာသည်။ တစ်ချိန်ကပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ "
"The first cells were likely born in hot volcanic waters, in conditions once thought impossible for biology."
"ပထမဆဲလ်တွေဟာမီးတောင်ပူထဲမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ တစ်ချိန်ကဇီဝဗေဒအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆတယ်။ "
"The closer we study life, the more extreme places we find it thriving."
"The closer we study life, the more extreme places we find it thriving." Here on our planet,
ဘဝကိုလေ့လာလေလေ၊ အစွန်းရောက်သောနေရာများသို့ရှင်သန်လာလေလေဖြစ်သည်။ ငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာ
Here on our planet,
the frozen Himalayas,
In the vacuum ofaspace simulator,
အာကာသ Simulator ၏လေဟာနယ်ထဲမှာ,
"New research suggests that life emerged over4billion years ago, when Earth was an alien and deadly place."
လေ့လာမှုအသစ်အရကမ္ဘာသည်ဂြိုလ်သားများနှင့်သေစေနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄ ဘီလီယံကျော်ကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
"The planet was ravaged by intense volcanism and an asteroid storm that lasted 100 million years."
နှစ်ပေါင်းသန်း ၁၀၀ ကြာသောပြင်းထန်သောမီးတောင်များနှင့်ဂြိုဟ်သိမ်မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
"Yet even in these extreme conditions, life quickly foundafoothold."
"Yet even in these extreme conditions, life quickly foundafoothold." Very very quickly,
as soon as the Earth cooled off after its formation,
we know that life began here.
Because it happened quickly here on Earth,
we think it is going to happen quickly
"It teaches us that life is fast acting, tenacious, and made of basic, common ingredients."
"After4billion years of isolation, the search for our cosmic kin has finally begun."
နှစ်ပေါင်း ၄ ဘီလီယံအထီးကျန်ဖြစ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏စကြဝkinာပေါက်ဘော်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်စတင်ခဲ့သည်။
"Where there is water, there is life - and so our best chance is to look for ocean worlds like Earth."
"Our search for Earth-like planets has only just begun, and the findings are tantalizing."
KEPLER-62F Distance: 1200 Light Years.
KEPLER-62F အကွာအဝေး - အလင်းနှစ် ၁၂၀၀ ။
KEPLER-62F Distance: 1200 Light Years. Size: 1.4x Earth.
KEPLER-62F အကွာအဝေး - အလင်းနှစ် ၁၂၀၀ ။ အရွယ်အစား: 1.4x ကမ္ဘာမြေ။
KEPLER-62F Distance: 1200 Light Years. Size: 1.4x Earth. Temperature: ≥ -85ºF.
KEPLER-62F အကွာအဝေး - အလင်းနှစ် ၁၂၀၀ ။ အရွယ်အစား: 1.4x ကမ္ဘာမြေ။ အပူချိန်≥-85ºF။
KEPLER-62F Distance: 1200 Light Years. Size: 1.4x Earth. Temperature: ≥ -85ºF. Age: ~7 billion years.
KEPLER-62F အကွာအဝေး - အလင်းနှစ် ၁၂၀၀ ။ အရွယ်အစား: 1.4x ကမ္ဘာမြေ။ အပူချိန်≥-85ºF။ အသက် - ~ ၇ ဘီလီယံနှစ်
KEPLER-62F Distance: 1200 Light Years. Size: 1.4x Earth. Temperature: ≥ -85ºF. Age: ~7 billion years. Possible Water World
KEPLER-62F အကွာအဝေး - အလင်းနှစ် ၁၂၀၀ ။ အရွယ်အစား: 1.4x ကမ္ဘာမြေ။ အပူချိန်≥-85ºF။ အသက် - ~ ၇ ဘီလီယံနှစ် ဖြစ်နိုင်သောရေကမ္ဘာ
TRAPPIST-1D Distance: 41 Light Years.
TRAPPIST-1D အကွာအဝေး: ၄၁ အလင်းနှစ်များ။
TRAPPIST-1D Distance: 41 Light Years. Size: 0.77x Earth.
TRAPPIST-1D အကွာအဝေး: ၄၁ အလင်းနှစ်များ။ အရွယ်အစား: 0.77x ကမ္ဘာမြေ။
TRAPPIST-1D Distance: 41 Light Years. Size: 0.77x Earth. Age: ~7.5 billion years.
TRAPPIST-1D အကွာအဝေး: ၄၁ အလင်းနှစ်များ။ အရွယ်အစား: 0.77x ကမ္ဘာမြေ။ အသက် - ~ ၇.၅ ဘီလီယံနှစ်။
TRAPPIST-1D Distance: 41 Light Years. Size: 0.77x Earth. Age: ~7.5 billion years. Temperature: ≥ 20ºF.
TRAPPIST-1D အကွာအဝေး: ၄၁ အလင်းနှစ်များ။ အရွယ်အစား: 0.77x ကမ္ဘာမြေ။ အသက် - ~ ၇.၅ ဘီလီယံနှစ်။ အပူချိန်: ≥20ºF။
TRAPPIST-1D Distance: 41 Light Years. Size: 0.77x Earth. Age: ~7.5 billion years. Temperature: ≥ 20ºF. Possible Water World
TRAPPIST-1D အကွာအဝေး: ၄၁ အလင်းနှစ်များ။ အရွယ်အစား: 0.77x ကမ္ဘာမြေ။ အသက် - ~ ၇.၅ ဘီလီယံနှစ်။ အပူချိန်: ≥20ºF။ ဖြစ်နိုင်သောရေကမ္ဘာ
TEEGARDEN-B Distance: 12 Light Years.
TEEGARDEN-B အဝေးသင် - ၁၂ နှစ်အလင်းရောင်။
TEEGARDEN-B Distance: 12 Light Years. Size: 1.07x Earth.
TEEGARDEN-B အဝေးသင် - ၁၂ နှစ်အလင်းရောင်။ အရွယ်အစား: 1.07x ကမ္ဘာမြေ။
TEEGARDEN-B Distance: 12 Light Years. Size: 1.07x Earth. Age: 8 billion years.
TEEGARDEN-B အဝေးသင် - ၁၂ နှစ်အလင်းရောင်။ အရွယ်အစား: 1.07x ကမ္ဘာမြေ။ အသက် - ၈ ဘီလီယံနှစ်။
TEEGARDEN-B Distance: 12 Light Years. Size: 1.07x Earth. Age: 8 billion years. Minimum temperature: ≥ 20ºF.
TEEGARDEN-B အဝေးသင် - ၁၂ နှစ်အလင်းရောင်။ အရွယ်အစား: 1.07x ကမ္ဘာမြေ။ အသက် - ၈ ဘီလီယံနှစ်။ အနည်းဆုံးအပူချိန်: ≥20ºF။
TEEGARDEN-B Distance: 12 Light Years. Size: 1.07x Earth. Age: 8 billion years. Minimum temperature: ≥ 20ºF. Possible Water World
TEEGARDEN-B အဝေးသင် - ၁၂ နှစ်အလင်းရောင်။ အရွယ်အစား: 1.07x ကမ္ဘာမြေ။ အသက် - ၈ ဘီလီယံနှစ်။ အနည်းဆုံးအပူချိန်: ≥20ºF။ ဖြစ်နိုင်သောရေကမ္ဘာ
K2-18B Distance: 111 Light Years.
K2-18B အကွာအဝေး - ၁၁၁ အလင်းနှစ်။
K2-18B Distance: 111 Light Years. Size: 2.7x Earth.
K2-18B အကွာအဝေး - ၁၁၁ အလင်းနှစ်။ အရွယ်အစား: 2.7x ကမ္ဘာမြေ။
K2-18B Distance: 111 Light Years. Size: 2.7x Earth. Temperature: -100 -116ºF.
K2-18B အကွာအဝေး - ၁၁၁ အလင်းနှစ်။ အရွယ်အစား: 2.7x ကမ္ဘာမြေ။ အပူချိန်: -100 -116ºF
K2-18B Distance: 111 Light Years. Size: 2.7x Earth. Temperature: -100 -116ºF. Confirmed atmospheric water vapor
K2-18B အကွာအဝေး - ၁၁၁ အလင်းနှစ်။ အရွယ်အစား: 2.7x ကမ္ဘာမြေ။ အပူချိန်: -100 -116ºF အတည်ပြုပြီးလေထုရေငွေ့
"We have barely scratched the surface. Nature's trove of secrets is bottomless."
"ကျနော်တို့ကမျက်နှာပြင်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ သဘာဝတရားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကအနက်ဆုံးပဲ။ "
"We have barely scratched the surface. Nature's trove of secrets is bottomless." We know that the galaxy is awash in water.
"ကျနော်တို့ကမျက်နှာပြင်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ သဘာဝတရားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကအနက်ဆုံးပဲ။ " နဂါးငွေ့တန်းသည်ရေထဲတွင်ပြည့်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
We know that the galaxy is awash in water.
All of the things that we know were
necessary for life to begin on this planet
exist on abundance throughout the galaxy.
"Looking at the raw numbers, the existence of alien life seems almost inevitable."
နံပါတ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဂြိုလ်သားတို့၏ဘ ၀ သည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်လိမ့်မည်။
"The latest data suggest that up to 1/4 of stars have rocky planets orbiting in their habitable zone - the right distance for liquid water."
နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များအရကြယ် ၁ ပုံ ၁ ပုံအထိသည်၎င်းတို့နေထိုင်နိုင်သောဇုန်တွင်လှည့်ပတ်နေသောကျောက်တုံးဂြိုဟ်များရှိသည် - ရေသည်မှန်ကန်သောအကွာအဝေးဖြစ်သည်။
"In our Milk Way galaxy alone, that's ~50 billion worlds like Earth."
ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီတစ်ခုတည်း၌ပင်ကမ္ဘာကြီးသည်ကမ္ဘာကြီး ၅၀ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
"In the entire universe, the possible number of habitable planets is staggering:"
"In the entire universe, the possible number of habitable planets is staggering:" 100,000,000,000,000,000,000.
"စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနေထိုင်နိုင်သောဂြိုဟ်အရေအတွက်သည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်သည်။ " 100,000,000,000,000,000,000,000 ။
"Imagine each flash of light represents an Earth-like planet."
"You would have to watch this animation for overabillion years to view them all."
"Each one withahistory as rich and unique as Earth."
"Trillions and trillions of chemical soups, stewing for eons."
There are more habitable
Earth-mass planets in the observable volume
of the universe than there are grains of sand
"Among this abundance of worlds, many will be deadly to life as we know it."
"There will be planets in the habitable zone that are scorched, frozen, and suffocated by poison gases."
"Many will lack an atmosphere, critical for temperature regulation, or have one that is deadly."
"Venus, once thought to potentially support life, is now sterilized byacrushing, toxic atmosphere."
"But life may not be confined to the habitable zone."
"Far from the warmth of their star, the moons of giant gas planets may be hidden oases for life."
"Their energy comes not from starlight, but from gravity - the lurching push and pull of the host planet."
သူတို့၏စွမ်းအင်သည်ကြယ်များမှမဟုတ်ဘဲဆွဲငင်အား - ဂြိုဟ်ဂြိုဟ်၏ဆွဲအားနှင့်လာသည်။
"Icy Enceladus has it all:ahuge subsurface ocean with hydrothermal vents spewing the chemistry of life."
"Icy Enceladus မှာဒီအရာအားလုံးရှိတယ်။ သက်ရှိဓာတုဗေဒကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ hydrothermal အပေါက်တွေပါတဲ့ကြီးမားတဲ့မြေအောက်သမုဒ္ဒရာကြီး။ "
"Titan is especially alluring - larger than Mercury and speckled with methane lakes and organic compounds."
Titan သည်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်သည်။ Mercury ထက်ပိုကြီးပြီးမီသိန်းကန်များနှင့်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။
"In 2026, NASA plans to sendadrone to Titan, seeking out signs of life in its valleys and craters."
၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် NASA သည် Titan သို့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းပို့ဆောင်ရန်၎င်း၏ချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ကတ္တရာစေးများရှိဘဝလက္ခဏာများကိုရှာဖွေရန်စီစဉ်နေသည်။
"here may be 100 trillion exomoons in our galaxy alone - 100 times the number of planets."
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုတည်းတွင် exomoons ၁၀၀ ထရီလီယံရှိနိုင်သည်။ ဂြိုလ်အရေအတွက်ထက်အဆ ၁၀၀ ပိုများနိုင်သည်။
"Some may even be Earth sized, with atmospheres and surface water."
"With so many places to find life, it seems onlyamatter of time before we makeadiscovery."
"Some think we already have."
"On June 30, 1976, the Viking lander on Mars found something that still remains unexplained."
၁၉၇၆၊ ဇွန် ၃၀ တွင်အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ဗိုက်ကင်းဆင်းသက်သူသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိသေးသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
"After being injected with nutrients, Martian sol samples expelled signature radioactive gas - just like soils from Earth."
"အာဟာရတွေထိုးသွင်းပြီးနောက်မှာတော့ Martian sol နမူနာတွေကရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ငွေ့တွေကိုထုတ်လွှတ်တယ်။ ကမ္ဘာမြေကမြေဆီလွှာလိုပဲ။ "
Sterilized Soil |
Sterilized Soil | Sterilized Soil |
ပိုးမြေဆီလွှာ | ပိုးမြေဆီလွှာ |
Sterilized Soil | California Soil | Martian soil
ပိုးမြေဆီလွှာ | ကယ်လီဖိုးနီးယားမြေဆီလွှာ Martian မြေဆီလွှာ
"Was this signalanatural phenomenon, or our first encounter with alien biology?"
or any other body of the Solar System
would indicate that the whole chain of evolutions.
Cosmic, chemical and biological,
"If we haven't found life already, it may not be long until we do."
ကျွန်တော်တို့ဟာဘ ၀ ကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်၊ ငါတို့မရောက်မချင်းကြာမြင့်လိမ့်မယ်။
"NASA scientists now think we are on the verge of discovery."
"NASA scientists now think we are on the verge of discovery." Within all of our lifetimes we're going to understand
NASA မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဟုထင်မြင်နေကြသည်။ ငါတို့ဘ ၀ တလျှောက်လုံးမှာငါတို့နားလည်သွားမှာပါ
"NASA scientists now think we are on the verge of discovery." that there is life on other bodies in the Solar System.
NASA မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဟုထင်မြင်နေကြသည်။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိအခြားကိုယ်ခန္ဓာများ၌သက်ရှိများရှိသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
We're going to find planets around
other stars that we can say
we see potential signs of habitability in their atmospheres.
That's all going to happen in the next 10 to 20 years.
ဒါတွေအားလုံးဟာနောက် ၁၀ နှစ်မှအနှစ် ၂၀ အတွင်းဖြစ်ပျက်တော့မှာပါ။
We're on the verge of things that the
people have wondered about for millennia:
"If we do find life out there, what will we discover about ourselves?"
"What chapter is Earth in the story of life?"
The universe is nearly 14 billion years old.
စကြာ ၀ yearsာသည်နှစ်ပေါင်း ၁၄ ဘီလီယံနီးပါးသက်တမ်းရှိသည်။
ငါတို့နဂါးငွေ့တန်းသည်နှစ်ပေါင်း ၁၂ ဘီလီယံနှင့်တူသည်။
So, there could be life out there
"Is Earthalatecomer on the cosmic stage?"
"ကမ္ဘာမြေသည်စကြ ၀ stageာတွင်အဆင့်နှောင်းနေသူလား"
"Just how ancient could life be?"
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၀၀ က
လွန်ခဲ့သော ၁ သန်းက
လွန်ခဲ့သော ၅ သန်းက
လွန်ခဲ့သော ၁၀ သန်း \_ t
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀ က
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၀၀ သန်းက
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 200 သန်းက
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 400 သန်းက
လွန်ခဲ့သော ၁ ဘီလီယံက
လွန်ခဲ့သော ၂ ဘီလီယံက
လွန်ခဲ့သော ၃ ဘီလီယံက
လွန်ခဲ့သော ၄ ဘီလီယံက
လွန်ခဲ့သော ၅ ဘီလီယံက
လွန်ခဲ့သော ၁၀ ဘီလီယံက
လွန်ခဲ့သော ၁၃.၈ ဘီလီယံက
အဖြစ်အပျက် - Big Bang
"For its first few million years, the cosmos was too hot for life as we know it."
"The ambient temperature would have boiled you alive."
Event: The First Star
"When it was finally cool enough for life, there were no stars and planets Only huge lumbering clouds of hydrogen."
"After 70 million years, gravity took hold of these clouds and spun them into the first generation of stars."
"နှစ်ပေါင်းသန်း ၇၀ ကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီဆွဲငင်အားတွေဟာဆွဲငင်အားကိုရယူပြီးပထမဆုံးမျိုးဆက်ကြယ်တွေထဲကိုလှည့်ပတ်သွားစေတယ်"
"The first stars were massive and bright, but there was no life to watch them rise."
"ပထမဆုံးကြယ်တွေကကြီးမားပြီးတောက်ပတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုကြည့်ရတာအသက်မရှိဘူး။ "
"Vital heavy elements were still being forged in their hot stellar cores. Not even The Big Bang was hot enough to create them."
"ကြီးမားတဲ့ဒြပ်စင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ကြယ်တွေရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာပုံသွင်းနေတုန်းပဲ။ Big Bang တောင်မှသူတို့ကိုမဖန်တီးနိုင်လောက်အောင်ပူနေတယ်။ "
"Vital heavy elements were still being forged in their hot stellar cores. Not even the Big Bang was hot enoughto create them." The only elements that were created on The Big Bang were hydrogen,
"အလွန်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်များကိုသူတို့၏ကြယ်စင်ကြယ်များတွင်တွေ့ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Big Bang တောင်မှ၎င်းတို့ကိုဖန်တီးရန်လုံလောက်သောအပူမရှိခဲ့ပါ။ " Big Bang တွင်ဖန်တီးခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောဒြပ်စင်များသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊
The only elements that were created on The Big Bang were hydrogen,
Big Bang တွင်ဖန်တီးခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောဒြပ်စင်များသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊
helium andalittle bit of lithium.
All the stuff that makes your life livable
သင်၏ဘ ၀ ကိုရှင်သန်နိုင်စေသောအရာများ
those elements weren't created on The Big Bang.
အဲ့ဒီ element တွေကို Big Bang မှာမဖန်တီးခဲ့ပါဘူး။
The only place they were created
is in the fiery cores of stars
ကြယ်များ၏မီးရထား cores ၌တည်ရှိ၏
and the only way they could get into your body
is if the stars were kind enough to explode.
Event: Death And Rebirth
"The explosive death of the first mid-sized stars seeded the cosmos with the ingredients for life."
"အလယ်အလတ်တန်းစားကြယ်တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့သေဆုံးမှုကြောင့်စကြဝosာကိုသက်ရှိတွေအတွက်ပါ ၀ င်စေခဲ့ပါတယ်။ "
"From their ashes roseasecond generation of suns - this time with rocky planets dancing around them."
"This is the moment: the raw ingredients for life together for the first time, ~13.7 billion years ago."
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၃.၇ ဘီလီယံကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အတူတကွနေထိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကြမ်းများဖြစ်သောဤအချိန်သည်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
"Some believe the conditions for life existed even earlier, in the warm afterglow of creation."
"As the heat from the Big Bang faded, the universe passed throughagoldilocks era."
"Big Bang မှအပူချိန်ညှိုးနွမ်းလာသည်နှင့်အမျှစကြာ ၀ aာသည်ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုဖြတ်သန်းသွားသည်"
"Some 15 million years after time began, the ambient temperature reachedabalmy 75º F (24º C)."
"အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၁၅ သန်းလောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ဟာ ၇၅ ံဖာရင်ဟိုက် (၂၄ံC) ထိရောက်ခဲ့တယ်။ "
"For millions of years, it was warm in all directions, like an endless summer day on Earth."
"In theory, stars and planets could have formed this early on, in hypothesized ultra-dense regions of space."
"If such regions existed, liquid water could have flowed abundantly, even on rogue planets far from any star."
"Could this have been dawn of life? Alien beings feeding off the heat of the Big Bang?"
ဒီဘ ၀ ဟာအရုဏ် ဦး ဖြစ်မလား။ Big Bang ရဲ့အပူကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဂြိုလ်သားတွေလား။ "
"Somewhere out there may beaplanet with life nearly as old as the universe itself."
"Witha10 billion year head start, the universe could be teeming with life far more advanced than our own."
"နှစ်ပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံအစမှ စ၍ စကြဝtheာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝထက်များစွာသာလွန်သောဘဝနှင့်ပြည့်နေနိုင်သည်"
"Despite decades of searching, no sign of alien life has ever been confirmed, intelligent or otherwise."
"Could we really be alone?"
"Maybe primitive life is common, but intelligence is exceedingly rare."
"စကြဝlifeာရဲ့ဘ ၀ ဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဉာဏ်ရည်ကအရမ်းရှားတယ်။ "
"Maybe space is just too vast for feasible communication."
"Or maybe we are the first."
"ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ "
"Could we be the opening chapter inasprawling history of life?"
ဘ ၀ ရဲ့သမိုင်းကြောင်းအဖွင့်အခန်းကြီးလား။
20 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၂၀ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
21 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၂၁ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
22 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၂၂ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
23 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၂၃ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
24 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၂၄ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
25 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၂၅ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
30 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
ဘီလီယံနှစ် ၃၀ "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
35 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၃၅ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်နုပျိုပြီးဂြိုဟ်အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
40 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၄၀ ဘီလီယံနှစ် "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
45 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၄၅ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
50 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
ဘီလီယံနှစ် ၅၀ "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
55 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၅၅ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝuniverseာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
60 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
60 Billion Years "စကြ ၀ youngာသည်နုပျိုသည်။ ဂြိုလ်အများစုသည်မမွေးဖွားသေးပါ။ "
65 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၆၅ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း "စကြဝyoungာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
70 Billion Years "The universe is young, and the vast majority of planets have yet to be born."
၇၀ ဘီလီယံလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း "စကြဝyoungာသည်ငယ်ရွယ်။ ဂြိုလ်များ၏အများစုကိုမမွေးဖွားသေးပါ။ "
150 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ "အသက်အတွက်အသုံး ၀ င်သောအရာများသည်နောက်ထပ်နှစ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်အသားစွပ်ကိုစားလိမ့်မည်။ "
200 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
200 Billion Years "ဘဝအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်စိုက်ထူပါလိမ့်မည်။ "
250 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
၂၅၀ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း ၂၅၀ အသက်တာအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှစ်ပေါင်းတစ်သိန်း၊
300 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ "အသက်အတွက်အသုံး ၀ င်သောအရာများသည်နောက်ထပ်နှစ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်ငွိမ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ "
350 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း ၃၅၀ "ဘဝအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်စိုက်ထူပါလိမ့်မည်။ "
400 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း ၄၀၀ "ဘဝအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်စိုက်ထူပါလိမ့်မည်။ "
450 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
၄၅၀ ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း ၄၅၀ အသက်တာအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်အသားစွပ်
500 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
ဘီလီယံနှစ်ပေါင်း ၅၀၀ "ဘဝအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်စိုက်ထူပါလိမ့်မည်။ "
600 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
600 Billion Years "ဘဝအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်စိုက်ထူပါလိမ့်မည်။ "
700 Billion Years "The ingredients for life will be stewing for another 100,000,000,000,000 years."
ဘီလီယံ ၇၀၀ "နှစ်ပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အတွက်အသက်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ "
900 Billion Years "From this perspective, we are the dawn: the opening melody inasymphony of life."
900 Billion Years "ဒီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအရုဏ် ဦး၊ ဘ ၀ ၏ဆင်ဖိုနီတွင်အဖွင့်သီချင်းများ။ "
1 Trillion Years "From this perspective, we are the dawn: the opening melody inasymphony of life."
၁ ထရီလီယံနှစ် "ဒီရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရုဏ် ဦး ဖြစ်၍ ဘဝ၏ဆင်ဖိုနီတွင်အဖွင့်သီချင်းများ။ "
2 Trillion Years "From this perspective, we are the dawn: the opening melody inasymphony of life."
၂ ထရီလီယံနှစ် "ဒီရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရုဏ် ဦး ဖြစ်၍ ဘဝ၏ဆင်ဖိုနီတွင်အဖွင့်သီချင်းများ။ "
4 Trillion Years "From this perspective, we are the dawn: the opening melody inasymphony of life."
၄ ထရီလီယံနှစ် "ဒီရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရုဏ် ဦး၊ ဘဝ၏ဆင်ဖိုနီတွင်အဖွင့်သီချင်းများ။ "
8 Trillion Years "From this perspective, we are the dawn: the opening melody inasymphony of life."
၈ ထရီလီယံနှစ် "ဒီရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရုဏ် ဦး ဖြစ်၍ ဘဝ၏ဆင်ဖိုနီတွင်အဖွင့်သီချင်းများ။ "
16 Trillion Years "From this perspective, we are the dawn: the opening melody inasymphony of life."
၁၆ ထရီလီယံနှစ် "ဒီရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရုဏ် ဦး ဖြစ်၍ ဘဝ၏သံစုံတီးဝိုင်းတွင်အဖွင့်သီချင်းများ။ "
32 Trillion Years "From this perspective, we are the dawn: the opening melody inasymphony of life."
၃၂ ထရီလီယံနှစ် "ဒီရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရုဏ် ဦး ဖြစ်၍ ဘဝ၏ဆင်ဖိုနီတွင်အဖွင့်သီချင်းများ။ "
~ 100 ထရီလီယံနှစ်ကြာပြီးနောက်
Event: Last Star Dies ~100 Trillion Years Later
အဖြစ်အပျက် - လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ထရီလီယံနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးကြယ်သည်သေဆုံးသည်
"Red dwarf stars can live up to 10 trillion years, bathing their planets in starlight for eons."
"အနီရောင်ထောင်ပြီးကြယ်များသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀ ထရီလီယံအထိအသက်ရှင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့၏ဂြိုလ်များကိုကြယ်များ၌ eons များအတွက်ရေချိုးသည်။ "
"Life is much more probable on these time scales, where conditions are stable for vast periods of time."
"ဘ ၀ သည်များစွာသောအချိန်ကာလများအတွက်အခြေအနေများတည်ငြိမ်သောဤအချိန်အတိုင်းအတာများ၌ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ "
"Any beings living close to these stars would have to contend with violent solar flares that continually threaten extinction."
"Many of these planets would be tidally locked - one side permanently exposed to the sun, the other frozen in darkness."
"But as Earth has taught us, life is remarkably adaptable."
"What forms might life take when it has trillions of years to evolve?"
"One day, somehow, the story of life will come to an end."
တစ်နေ့မှာဘ ၀ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်။
"If we are the first chapter of that story, we have the chance to carry the torch of life far into the future."
"And if biology does persist far into the future, then we live inaprivileged moment."
In later chapters, the universe will seem far different.
နောက်ပိုင်းအခန်းများတွင်စကြာ ၀ universeာသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားနေလိမ့်မည်။
"The expansion of spacetime will make distant stars invisible, and the night skies will go dark."
"Perhaps life in the far future will wonder: What it was like to live in the universe's brilliant early days?"
"We are lucky enough to know the answer."
Melodysheep အားဖြင့် Crafted လက်
Hand Crafted By Melodysheep Supported By
အားဖြင့်ထောက်ပံ့ Melodysheep အားဖြင့် Crafted
Hand Crafted By Melodysheep Supported By Protocol Labs
Protocol Labs မှထောက်ပံ့ပေးသော Melodysheep မှလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်
Supported By Protocol Labs Featuring The Voices Of
Voices Of The Voices Of Protokol Labs များဖြင့်ပံ့ပိုးသည်
Protocol Labs Featuring The Voices Of Douglas Rain
ဒေါက်ဂလပ်မိုး၏အသံများပါ ၀ င်သောပရိုတိုကော Labs
Featuring The Voices Of Douglas Rain Orson Welles
Douglas Rain Orson Welles ၏အသံများဖြင့်ဖော်ပြခြင်း
Douglas Rain Orson Welles David Christian
Douglas Rain Orson Welles ဒေးဗစ်ခရစ်ယာန်
Orson Welles David Christian Michelle Thaller
Orson Welles ဒေးဗစ်ခရစ်ယာန် Michelle Thaller
David Christian Michelle Thaller Andrew Siemion
Michelle Thaller Andrew Siemion Dan Werthimer
Michelle Thaller အင်ဒရူး Siemion ဒန် Werthimer
Andrew Siemion Dan Werthimer Avi Loeb
အင်ဒရူး Siemion ဒန် Werthimer Avi Loeb
Dan Werthimer Avi Loeb Ellen Stofan
Avi Loeb Ellen Stofan Lawrence Krauss
Ellen Stofan Lawrence Krauss Concept, Music & Visuals By
Ellen Stofan ကလောရင့်စ် Krauss သဘောတရား၊ ဂီတနှင့်အမြင်အာရုံ
Lawrence Krauss Concept, Music & Visuals By Melodysheep / John D. Boswell
Lawrence Krauss ၏အယူအဆ၊ ဂီတနှင့်အမြင်အာရုံကို Melodysheep / John D. Boswell မှတင်ပြသည်
Concept, Music & Visuals By Melodysheep / John D. Boswell Additional Visuals By
အယူအဆ၊ တေးဂီတနှင့် Visuals မှ Melodysheep / John D. Boswell မှနောက်ထပ်ကြည့်ရှုရန်
Melodysheep / John D. Boswell Additional Visuals By Julius Horsthuis
Julius Horsthuis မှ Melodysheep / John D. Boswell နောက်ထပ် Visuals
Additional Visuals By Julius Horsthuis Konstantin Kovalenko
အပိုဆောင်း Visuals အားဖြင့် Julius Horsthuis Konstantin Kovalenko
Julius Horsthuis Konstantin Kovalenko NASA
Julius Horsthuis NASA မှ Konstantin Kovalenko၊
Konstantin Kovalenko NASA Evolve
NASA Evolve Special Thanks To
Evolve Special Thanks To Juan Benet
Juan Benet ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါ
Special Thanks To Juan Benet Julius Horsthuis
Juan Benet Julius Horsthuis အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်
Juan Benet Julius Horsthuis Konstantin Kovalenko
Julius Horsthuis Konstantin Kovalenko My Patreon Supporters
ကျွန်ုပ်၏ Patreon ထောက်ခံသူများ Julius Horsthuis Konstantin Kovalenko
Konstantin Kovalenko My Patreon Supporters Support This Production At
Konstantin Kovalenko ကျွန်ုပ်၏ Patreon ထောက်ခံသူများသည်ဤထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့သည်
My Patreon Supporters Support This Production At patreon.com/melodysheep
ကျွန်ုပ်၏ Patreon ထောက်ခံသူများသည်ဤထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့သည် patreon.com/melodysheep တွင်ဖြစ်သည်
Support This Production At patreon.com/melodysheep Melodysheep.com
patreon.com/melodysheep တွင် Melodysheep.com တွင်ဤထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပါ
patreon.com/melodysheep Melodysheep.com Twitter: @musicalscience
patreon.com/melodysheep Melodysheep.com တွစ်တာ - @musicalscience
Melodysheep.com Twitter: @musicalscience Instagram: @melodysheep_
Melodysheep.com တွစ်တာ - @musicalscience Instagram - @melodysheep_
Twitter: @musicalscience Instagram: @melodysheep_ An
တွစ်တာ - @musicalscience Instagram - @melodysheep_ An
Instagram: @melodysheep_ An Amber Mountain Studios
Instagram: @melodysheep_ တစ်ခု Amber Mountain စတူဒီယိုဖြစ်သည်
An Amber Mountain Studios Production
Next on Life Beyond: Make contect with intelligent life Surviving the end of the universe The physics of alien life & more
ဆက်လက်၍ ဘဝနောက်သို့ - အသိဉာဏ်ရှိသောဘဝနှင့်ဆက်နွှယ်ပါစေစကြဝuniverseာ၏အဆုံးကိုကျော်လွှားခြင်းဂြိုလ်သား၏ရူပဗေဒနှင့်အခြားအရာများ
Subtitler: Ernesryst Sautrie Erick Soares Figueiredo fpetras
စာတန်းထိုး: Ernesryst Sautrie Erick Soares Figueiredo fpetras
Seng Jar edited Burmese subtitles for LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe.